Indlela yokukhuluma nothandana naye mayelana namakhondomu
Ingabe wena nothandana naye seninqume ukuthi nikulungele ukuya ocansini futhi sifuna ukuqinisekisa ukuthi awukhulelwa noma uthole izifo socansi ezithelelanayo (STI) noma igciwane lesandulela ngculazi (HIV). Kodwa uyiqala kanjani indaba yocansi oluphephile kanyemoluphephile namakhondomu?
Nanka amathiphu ambalwa:
Zama ukuyiyeki lendaba kuze kube wumzuzu wokugcina. Kungaba lula kakhulu ukuxoxa ngocansi oluphephile ngesikhathi ninquma ukuthi senikulungele ukuya ocansini. Ukuzama ukuxoxisana ngocansi oluphephile (okusho ukuthi nisebenzisa ikhondomu njalo) nokuzama ukuthola amakhondomu ngesikhathi nilala kungaba iphutha elikhulu.
Nazi ezinye zezindlela zokuveza lesihloko:
"Ingabe unayoo ikhondomu, noma singawathenga amakhomu?"
"Ngihlale ngisebenzisa ikhondomu. Angikulungele ukuba nomntwana.Wena"
"Wake wayisebenzisa ikhondomu yabesifazane? Mhlawumbe sizoyithanda kakhulu. Kufanele siyizame."
"Ingabe kufanele sisebenzise ikhondomu eyami noma eyakho?"
"Usuke wawabona amakhondomu amasha anuka kamnandi anelinemibala emtholampilo? Bane-strawberry, i-banana namaglebhisi!"
"Kunezinhlobo eziningi zamakhondomu manje. Ngizwa amanye azwakala emahle kakhulu futhi avikela ukukhulelwa noma ukuthola izifo ezithathelana ngocansi (STI)"
Kungumqondo omuhle ukufunda ukuthi ifakwa kanjani ikhondomu. Ngaleyo ndlela uma othandana naye engazi, ungamsiza. Khumbula ukusebenzisa amakhondomu kukuvikela ekuthola igciwane lesandulela ngculazi (HIV), nezinye izifo ezithelelala ngocansi kanye nokukhulelwa.
Uma unemibuzo eminingi noma ukukhathazeka vakashela emtholampilo oseduze nawe bese ukhuluma nbasebenzi bezempilo noma ubuze umbuzo wakho esigabeni sokuphawula ngezansi.